ဈေးကြီးတဲ့ ကမ္ဘာကျော် Brand တွေကိုအတုအစစ်ခွဲနည်းများ - Myanmar Lifestyle, Tech Review, Food Review
ဈေးကြီးတဲ့ ကမ္ဘာကျော် Brand တွေကိုအတုအစစ်ခွဲနည်းများ
24 Jan 2018 . 11:31 AM
ကမ္ဘာကျော် Brand ကြီးတွေကို ဈေးကြီးပေးဝယ်ထားပြီး အတုမိတာ ဂျင်းမိတာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင် အတုနဲ့အစစ်ကွဲပြားနေတဲ့အချက်တွေနဲ့ အစစ်ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ကုန်ပစ္စည်းအစစ်အတုဆိုတာ ထုပ်ပိုးပုံချင်းတူနိုင်ပေမယ့် အဖွင့် အပိတ်လုပ်ကြည့်ရင် ကွဲပြားတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ပစ္စည်းအစစ်တွေဟာအသေးစိတ် သပ်ရပ်အောင်ပြုလုပ်ထားတာမို့ ဘူးကိုအဖွင့်အပိတ်လုပ်ချိန်မှာ ကလစ်ဆိုတဲ့အသံလေးရှိနေပြီး အတုတွေကတော့ အသံကျီကျီထွက်နေတတ်တာမျိုးရှိတာမို့ ဘယ်ပစ္စည်းပဲစစ်စစ် ဒီအချက်ကိုလည်းသတိထားကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဂျင်းဘောင်းဘီရဲ့နောက်ဘက်အိတ်ကပ်ပေါ်ကမျဉ်းကွေးသဏ္ဍာန်ချုပ်ရိုးဟာ အားလုံးလိုလို တစ်ပုံစံတည်းချုပ်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ တချို့သော ဒီဇိုင်းတွေလောက်ပဲ နည်းနည်းကွဲပြားပါတယ်။ သူ့ရဲ့တံဆိပ်ကိုလည်း အမြဲတမ်းစာလုံးသေး”e” နဲ့ရေးလေ့ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့များ စာလုံးကြီး “E” နဲ့ရေးထားခဲ့ရင် ဒါဟာအတုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘောင်းဘီကြယ်သီးတွေဟာ သတ္တုနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့တံဆိပ်နဲ့ ထုတ်ကုန်အမှတ်စဉ်ကို ထွင်းထားလေ့ရှိပါတယ်။ ကြယ်သီးအပိုတွေကို Copper နဲ့ပြုလုပ်ထားပြီး ကြွေရည်သုတ်ထားပါတယ်။ ကြယ်သီးအတွင်းနဲ့အပြင်မှာ ထုတ်လုပ်တဲ့အမှတ်စဉ်ရေးထွင်းထားပါတယ်။ ဘောင်းဘီရဲ့နောက်ဘက်အမှတ်တံဆိပ်ပြားပေါ်မှာပါတဲ့ Serial Number နဲ့ ခါးပတ်နေရာအတွင်းပိုင်းမှာပါတဲ့ နံပါတ်တူရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကျီကြယ်သီးတွေဟာ ကမာနဲ့ပြုလုပ်ထားတာမို့ အရောင်ပြေးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကြယ်သီးပြားပြားလေးဖြစ်ပြီး အထက်အောက် ကြယ်သီးပေါက်နှစ်ပေါက်သာပါပါတယ်။ ကြယ်သီးပေါ်မှာဘာမှရေးသားထားခြင်းမရှိပါဘူး။ Lacoste polo ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ အစိမ်းရောင်မိကျောင်းပုံဟာ ထင်ထင်ရှားရှားရှိပါတယ်။ လျှာနဲ့ သွားတွေဟာ ထင်ရှားပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းဟာလည်း ထင်းပါတယ်။ ဒီတံဆိပ်ကို သီးခြားချုပ်လုပ်ပြီးမှ အကျီမှာပြန်ချုပ်ထားတာပါ။ အတုတွေမှာတော့ ဖျော့တော့တော့သာရှိပြီး အမြီးထောင်နေတတ်ပါတယ်။ အစစ်မှာတော့ မိကျောင်းဟာ အောက်ကြယ်သီးရဲ့ မနီးမဝေးမှာရှိနေတာပါ။ အတုတွေမှာတော့ တံဆိပ်ကိုအောက်ဆုံးကြယ်သီးနဲ့ တစ်တန်းတည်းရှိနေတတ်ပါတယ်။
အသားနှစ်ထပ်နဲ့ Size တွေကို စစ်ဆေးကြည့်ပါ
VS ရေကူးဝတ်စုံတွေတိုင်းဟာ အသားကိုနှစ်ထပ်ချုပ်ထားတာပါ။ Size ကိုသတ်မှတ်ရာမှာလည်း XS, S, M, L, XL ဆိုပြီးရေးလေ့ရှိပါတယ်။ အတုတွေကတော့ S, M , L ဆိုပြီး ၃ မျိုးပဲလာတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ အတွင်းခံဘရာနဲ့တူတဲ့ရေကူးဝတ်စုံအစစ်တွေမှာတော့ ပုံမှန်ဘရာကိုသတ်မှတ်သလိုပဲ Size တွေကို 34А, 34В စသဖြင့် သတ်မှတ်ပါတယ်။ အတွင်းက Tag ဟာ အဖြူ ၊ အမည်း ၊ ပန်းရောင်နဲ့ အကြည်လေး ပဲသုံးလေ့ရှိပြီး ထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံကတော့ တရုတ်နဲ့ သီရိလင်္ကာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နာရီအစစ်ရဲ့မျက်နှာပြင်ဟာ ပြာလဲ့လဲ့ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရေစက်လေးကိုမှန်ပေါ်ချကြည့်ရင် ရေစက်လေးဟာ အလုံးလိုက်လေးတင်နေတာတွေ့ရမှာပါ။ ပြက္ခဒိန်ပြတဲ့ခွက်လေးဟာ အနည်းငယ်ကြွတက်နေတတ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်နံပါတ် ၆ နေရာမှာ သရဖူပုံလေးပါလေ့ရှိပါတယ်။ တချို့သောနာရီဒီဇိုင်းတွေမှာတော့ ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ နာရီအစစ်ဟာ အတင်းအနားကပ်နားထောင်ရင်တောင် စက်သံကြားရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ နာရီကျောဘက်မှာတော့ သူ့ရဲ့အသားတံဆိပ်နဲ့ ထုတ်လုပ်စဉ်နံပါတ်ကိုထွင်းထားတာတွေ့ရမှာပါ။
မျက်မှန်ဘူးကို လည်သာနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီး ကြယ်သီးပေါ်မှာ Ray-Ban ဆိုတဲ့စာလုံးကိုထွင်းထားတာတွေ့ရမှာပါ။ ကြယ်သီးရဲ့ဘယ်ဘက်မှာတော့ တံဆိပ်ခေါင်းအမှတ်အသားကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်မှန်အိတ်ရှေ့မျက်နှာပြင်ဟာ အနည်းငယ်ရှတတရှိပြီး ကျောဘက်ကတော့ နူးညံ့ပါတယ်။ အတွင်းမှာတော့ အနက်ရောင် ကတ္တီပါအထူသားပါဝင်ပါတယ်။
ဘယ်ဘက်မှန်သားပေါ်မှာ RB လို့လက်ရေးစာလုံးထွင်းထားပြီး ညာဘက်မှန်မှာတော့ လေဆာနဲ့တံဆိပ်ထွင်းထားပါတယ်။ ဘယ်ဘက်မှန်ကိုင်းပေါ်မှာ RB နဲ့စတဲ့ထုတ်လုပ်စဉ်နေ့စွဲ ရေးထားပြီး မျက်မှန်အရောင်၊ ချုံ့နိုင်ချဲ့နိုင်တဲ့အနေအထား၊ မှန်ရဲ့အတိုင်းအတာနဲ့ နှာရိုးအကျယ်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ ညာဘက်ကိုင်းမှာတော့ ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီ European standards ဖြစ်ကြောင်း တံဆိပ်ပါပါတယ်။
ဖိနပ်ရဲ့အောက်ခံ Sole ဟာ အနည်းဆုံး ၁.၁၈ လက်မအမြင့်ရှိပါတယ်။ ခြေဖနောင့်မှာ ALL STAR လို့ပါပါတယ်။ All Star ဆိုတဲ့ စာလုံးအလယ်မှာ ကြယ်ပုံပါပြီး R နေရာမှာ ကြယ်ပုံ ကွန့်လိုက်တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ ဖိနပ်ကြိုးပါတစ်ပါတည်း တပ်ဆင်ပြီးသားရောင်းပါတယ်။ ဖိနပ်လျှာထဲမှာ စတေကာပါပြီး ဖိနပ်ရဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်စဉ်ပါဝင်ပါတယ်။ Serical Number ဟာ ဂဏန်းခြောက်လုံးပါဝင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒီစတေကာအထက်နားလောက်မှာ ချုပ်ရိုးကြောင်းနှစ်ကြောင်းပါရှိပါတယ်။
Air Chamber နဲ့ ဖိနပ်လျှာကိုစစ်ဆေးပါ
Air Chamber ဟာ ဖိနပ်အောက်ဘက်မှ ပလတ်စတစ်အကြည်နဲ့ရှိနေပါတယ်။ အတုတွေမှာတော့ ဒီပလတ်စတစ်အောက်မှာ လေမထည့်သွင်းထားပါဘူး။ ဒီပလတ်စတစ်ကို နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အစစ်က နည်းနည်းလေးဖိရခက်ပြီး ချက်ချင်းဆိုသလို နဂိုအနေအထားပြန်ရသွားတတ်ပါတယ်။ ဖိနပ်လျှာမှာပါတဲ့ တံဆိပ်ပြားဟာ အပူနဲ့ဖိကပ်ထားတာမို့ ချုပ်ရိုးတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Serical Number ဟာ Code ၆ လုံးပါဝင်ပြီး နောက်သုံးလုံးဟာ Color Coding ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိနပ် Sole ပြားဟာ ကော်အကောင်းစားနဲ့ပြုလုပ်ထားပြီး ရှေ့ဘက်မှာယောင်ယောင်လေးပါးသွားပါတယ်။
Christian Louboutin ဖိနပ်တွေတိုင်းဟာ နောက်ဒေါက်နဲ့ရှေ့ဖနောင့် ရေပြင်ညီချထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ခြေဖနောင့်ဖျားဟာ မြေပြင်နဲ့အမြဲတွယ်ကုပ်မိနေမှာပါ။ ဖိနပ်ရဲ့ဒေါက်ကလည်း အရမ်းကြီးမမြင့်ဘဲ စီးရတာသက်သောင့်သက်သာရှိပါတယ်။ ဒီအချက်က Christian Louboutin ရဲ့ဝိသေသလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဖိနပ်အသားဟာ ရှေ့ခြမ်းရောဖနောင့်ခြမ်းရော ထပ်တူညီအောင်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဖိနပ်အောက်ခံ Sole ဟာ အမြဲတမ်းအနီရောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ “Christian Louboutin,“ ”Made in Italy,“ ဆိုတဲ့စာသားနဲ့ Size တွေကို ထွင်းထားပါတယ်။
အခရာပရိသတ်ကြီး Quality Brand တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆရာကြီးတစ်ဆူ ဖြစ်ပါစေသား။
ဈေးကွီးတဲ့ ကမ်ဘာကြျော Brand တှကေိုအတုအစဈခှဲနညျးမြား
ကမ်ဘာကြျော Brand ကွီးတှကေို ဈေးကွီးပေးဝယျထားပွီး အတုမိတာ ဂငျြးမိတာမြိုးမဖွဈရလအေောငျ အတုနဲ့အစဈကှဲပွားနတေဲ့အခကျြတှနေဲ့ အစဈရဲ့ဝိသသေလက်ခဏာတှကေို စုစညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။
ကုနျပစ်စညျးအစဈအတုဆိုတာ ထုပျပိုးပုံခငျြးတူနိုငျပမေယျ့ အဖှငျ့ အပိတျလုပျကွညျ့ရငျ ကှဲပွားတဲ့အခကျြကိုတှရေ့နိုငျပါတယျ။ ပစ်စညျးအစဈတှဟောအသေးစိတျ သပျရပျအောငျပွုလုပျထားတာမို့ ဘူးကိုအဖှငျ့အပိတျလုပျခြိနျမှာ ကလဈဆိုတဲ့အသံလေးရှိနပွေီး အတုတှကေတော့ အသံကြီကြီထှကျနတေတျတာမြိုးရှိတာမို့ ဘယျပစ်စညျးပဲစဈစဈ ဒီအခကျြကိုလညျးသတိထားကွညျ့နိုငျပါတယျ။
ဂငျြးဘောငျးဘီရဲ့နောကျဘကျအိတျကပျပျေါကမဉျြးကှေးသဏ်ဍာနျခြုပျရိုးဟာ အားလုံးလိုလို တဈပုံစံတညျးခြုပျထားလရှေိ့ပါတယျ။ တခြို့သော ဒီဇိုငျးတှလေောကျပဲ နညျးနညျးကှဲပွားပါတယျ။ သူ့ရဲ့တံဆိပျကိုလညျး အမွဲတမျးစာလုံးသေး”e” နဲ့ရေးလရှေိ့ပါတယျ။ တကယျလို့မြား စာလုံးကွီး “E” နဲ့ရေးထားခဲ့ရငျ ဒါဟာအတုဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဘောငျးဘီကွယျသီးတှဟော သတ်တုနဲ့ပွုလုပျထားတာဖွဈပွီး သူတို့ရဲ့တံဆိပျနဲ့ ထုတျကုနျအမှတျစဉျကို ထှငျးထားလရှေိ့ပါတယျ။ ကွယျသီးအပိုတှကေို Copper နဲ့ပွုလုပျထားပွီး ကွှရေညျသုတျထားပါတယျ။ ကွယျသီးအတှငျးနဲ့အပွငျမှာ ထုတျလုပျတဲ့အမှတျစဉျရေးထှငျးထားပါတယျ။ ဘောငျးဘီရဲ့နောကျဘကျအမှတျတံဆိပျပွားပျေါမှာပါတဲ့ Serial Number နဲ့ ခါးပတျနရောအတှငျးပိုငျးမှာပါတဲ့ နံပါတျတူရမှာဖွဈပါတယျ။
အကြီကွယျသီးတှဟော ကမာနဲ့ပွုလုပျထားတာမို့ အရောငျပွေးလေးတှဖွေဈပါတယျ။ ကွယျသီးပွားပွားလေးဖွဈပွီး အထကျအောကျ ကွယျသီးပေါကျနှဈပေါကျသာပါပါတယျ။ ကွယျသီးပျေါမှာဘာမှရေးသားထားခွငျးမရှိပါဘူး။ Lacoste polo ရဲ့အမှတျတံဆိပျဖွဈတဲ့ အစိမျးရောငျမိကြောငျးပုံဟာ ထငျထငျရှားရှားရှိပါတယျ။ လြှာနဲ့ သှားတှဟော ထငျရှားပွီး ခန်ဓာကိုယျကောကျကွောငျးဟာလညျး ထငျးပါတယျ။ ဒီတံဆိပျကို သီးခွားခြုပျလုပျပွီးမှ အကြီမှာပွနျခြုပျထားတာပါ။ အတုတှမှောတော့ ဖြော့တော့တော့သာရှိပွီး အမွီးထောငျနတေတျပါတယျ။ အစဈမှာတော့ မိကြောငျးဟာ အောကျကွယျသီးရဲ့ မနီးမဝေးမှာရှိနတောပါ။ အတုတှမှောတော့ တံဆိပျကိုအောကျဆုံးကွယျသီးနဲ့ တဈတနျးတညျးရှိနတေတျပါတယျ။
အသားနှဈထပျနဲ့ Size တှကေို စဈဆေးကွညျ့ပါ
VS ရကေူးဝတျစုံတှတေိုငျးဟာ အသားကိုနှဈထပျခြုပျထားတာပါ။ Size ကိုသတျမှတျရာမှာလညျး XS, S, M, L, XL ဆိုပွီးရေးလရှေိ့ပါတယျ။ အတုတှကေတော့ S, M , L ဆိုပွီး ၃ မြိုးပဲလာတာကိုတှရေ့မှာပါ။ အတှငျးခံဘရာနဲ့တူတဲ့ရကေူးဝတျစုံအစဈတှမှောတော့ ပုံမှနျဘရာကိုသတျမှတျသလိုပဲ Size တှကေို 34А, 34В စသဖွငျ့ သတျမှတျပါတယျ။ အတှငျးက Tag ဟာ အဖွူ ၊ အမညျး ၊ ပနျးရောငျနဲ့ အကွညျလေး ပဲသုံးလရှေိ့ပွီး ထုတျလုပျတဲ့နိုငျငံကတော့ တရုတျနဲ့ သီရိလင်ျကာပဲဖွဈပါတယျ။
နာရီအစဈရဲ့မကျြနှာပွငျဟာ ပွာလဲ့လဲ့ရှိနမှောဖွဈပါတယျ။ ရစေကျလေးကိုမှနျပျေါခကြွညျ့ရငျ ရစေကျလေးဟာ အလုံးလိုကျလေးတငျနတောတှရေ့မှာပါ။ ပွက်ခဒိနျပွတဲ့ခှကျလေးဟာ အနညျးငယျကွှတကျနတေတျပါတယျ။ ပုံမှနျအားဖွငျ့နံပါတျ ၆ နရောမှာ သရဖူပုံလေးပါလရှေိ့ပါတယျ။ တခြို့သောနာရီဒီဇိုငျးတှမှောတော့ ကှဲပွားနိုငျပါတယျ။ နာရီအစဈဟာ အတငျးအနားကပျနားထောငျရငျတောငျ စကျသံကွားရမှာ မဟုတျပါဘူး။ နာရီကြောဘကျမှာတော့ သူ့ရဲ့အသားတံဆိပျနဲ့ ထုတျလုပျစဉျနံပါတျကိုထှငျးထားတာတှရေ့မှာပါ။
မကျြမှနျဘူးကို လညျသာနဲ့ပွုလုပျထားပွီး ကွယျသီးပျေါမှာ Ray-Ban ဆိုတဲ့စာလုံးကိုထှငျးထားတာတှရေ့မှာပါ။ ကွယျသီးရဲ့ဘယျဘကျမှာတော့ တံဆိပျခေါငျးအမှတျအသားကိုတှရေ့မှာဖွဈပါတယျ။ မကျြမှနျအိတျရှမေ့ကျြနှာပွငျဟာ အနညျးငယျရှတတရှိပွီး ကြောဘကျကတော့ နူးညံ့ပါတယျ။ အတှငျးမှာတော့ အနကျရောငျ ကတ်တီပါအထူသားပါဝငျပါတယျ။
ဘယျဘကျမှနျသားပျေါမှာ RB လို့လကျရေးစာလုံးထှငျးထားပွီး ညာဘကျမှနျမှာတော့ လဆောနဲ့တံဆိပျထှငျးထားပါတယျ။ ဘယျဘကျမှနျကိုငျးပျေါမှာ RB နဲ့စတဲ့ထုတျလုပျစဉျနစှေဲ့ ရေးထားပွီး မကျြမှနျအရောငျ၊ ခြုံ့နိုငျခြဲ့နိုငျတဲ့အနအေထား၊ မှနျရဲ့အတိုငျးအတာနဲ့ နှာရိုးအကယျြကိုဖျောပွထားပါတယျ။ ညာဘကျကိုငျးမှာတော့ ထုတျလုပျတဲ့ကုမ်ပဏီ European standards ဖွဈကွောငျး တံဆိပျပါပါတယျ။
ဖိနပျရဲ့အောကျခံ Sole ဟာ အနညျးဆုံး ၁.၁၈ လကျမအမွငျ့ရှိပါတယျ။ ခွဖေနောငျ့မှာ ALL STAR လို့ပါပါတယျ။ All Star ဆိုတဲ့ စာလုံးအလယျမှာ ကွယျပုံပါပွီး R နရောမှာ ကွယျပုံ ကှနျ့လိုကျတာမြိုးလညျး ရှိပါတယျ။ ဖိနပျကွိုးပါတဈပါတညျး တပျဆငျပွီးသားရောငျးပါတယျ။ ဖိနပျလြှာထဲမှာ စတကောပါပွီး ဖိနပျရဲ့အခကျြအလကျတှနေဲ့ ထုတျကုနျပစ်စညျးအမှတျစဉျပါဝငျပါတယျ။ Serical Number ဟာ ဂဏနျးခွောကျလုံးပါဝငျလရှေိ့ပါတယျ။ ဒီစတကောအထကျနားလောကျမှာ ခြုပျရိုးကွောငျးနှဈကွောငျးပါရှိပါတယျ။
Air Chamber နဲ့ ဖိနပျလြှာကိုစဈဆေးပါ
Air Chamber ဟာ ဖိနပျအောကျဘကျမှ ပလတျစတဈအကွညျနဲ့ရှိနပေါတယျ။ အတုတှမှောတော့ ဒီပလတျစတဈအောကျမှာ လမေထညျ့သှငျးထားပါဘူး။ ဒီပလတျစတဈကို နှိပျကွညျ့မယျဆိုရငျ အစဈက နညျးနညျးလေးဖိရခကျပွီး ခကျြခငျြးဆိုသလို နဂိုအနအေထားပွနျရသှားတတျပါတယျ။ ဖိနပျလြှာမှာပါတဲ့ တံဆိပျပွားဟာ အပူနဲ့ဖိကပျထားတာမို့ ခြုပျရိုးတှရေ့မှာမဟုတျပါဘူး။ Serical Number ဟာ Code ၆ လုံးပါဝငျပွီး နောကျသုံးလုံးဟာ Color Coding ဖွဈပါတယျ။ ဖိနပျ Sole ပွားဟာ ကျောအကောငျးစားနဲ့ပွုလုပျထားပွီး ရှဘေ့ကျမှာယောငျယောငျလေးပါးသှားပါတယျ။
Christian Louboutin ဖိနပျတှတေိုငျးဟာ နောကျဒေါကျနဲ့ရှဖေ့နောငျ့ ရပွေငျညီခထြားတာဖွဈပါတယျ။ ခွဖေနောငျ့ဖြားဟာ မွပွေငျနဲ့အမွဲတှယျကုပျမိနမှောပါ။ ဖိနပျရဲ့ဒေါကျကလညျး အရမျးကွီးမမွငျ့ဘဲ စီးရတာသကျသောငျ့သကျသာရှိပါတယျ။ ဒီအခကျြက Christian Louboutin ရဲ့ဝိသသေလို့ဆိုနိုငျပါတယျ။ ဖိနပျအသားဟာ ရှခွေ့မျးရောဖနောငျ့ခွမျးရော ထပျတူညီအောငျပွုလုပျထားပါတယျ။ ဖိနပျအောကျခံ Sole ဟာ အမွဲတမျးအနီရောငျပဲဖွဈပါတယျ။ ဒီအပျေါမှာ “Christian Louboutin,“ ”Made in Italy,“ ဆိုတဲ့စာသားနဲ့ Size တှကေို ထှငျးထားပါတယျ။
အခရာပရိသတျကွီး Quality Brand တှနေဲ့ပတျသကျရငျဆရာကွီးတဈဆူ ဖွဈပါစသေား။
by yoelu . 8 hours ago